नेजाको ह्युस्टन अधिवेसन, नेतृत्व चयनमै सीमित :: Press Chautari ::
गत में महिनाको २ र ३ तारिख सम्पन्न भएको नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) को चौथो अधिवेसनले गौतम दाहालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । टेक्सास राज्यको ह्युस्टन शहरमा सम्पन्न अधिवेसनले दाहाललार्ई आगामी दुई बर्षको लागि नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको छ । सन् २००७ सालमा औपचारिक दर्ता पाएको नेजाले स्थापनाकालदेखि हालसम्म आईपुग्दा अमेरिकामा नेपाली पत्रकारिता र समग्र सञ्चार क्षेत्रमा राम्रै चर्चा बटुलेको छ । स्थापनाका शूरुवाती बर्षहरुमा थोरै पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको नेजामा ह्युस्टन अधिवेसनसम्म आईपुग्दा सदस्य संख्या मात्रै हेर्ने हो भने उल्लेख्य रुपमा बढ्दो छ । यद्यपी अमेरिकामा नेपाली सञ्चार गृह र पत्रकारहरु बढ्दै जाँदा सदस्यता संख्या बढ्दै जानु स्वाभाविक नै मान्नु पर्छ ।
अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीमा स्थापना भएको नेजाको पहिलो अधिवेसन डिसी क्षेत्रमै सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो क्रमसः न्युजर्सीको एटलान्टिक सिटी र न्युयोर्कको अस्टोरियामा सम्पन्न भएसँगै नेजाको चौथो अधिवेसन टेक्सास राज्यको ह्युस्टन शहर पुगेको हो । १२ जना सदस्य रहेको टेक्सास अधिवसेनको लागि उपर्युक्त स्थान थियो या थिएन त्यो फरक बिषय हो तर आयोजकको सम्पूर्ण तयारी र कुशल व्यावस्थापनलाई हेर्ने हो भने अर्काे अधिवेसन निक्कै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । ह्युस्टन अधिवेसन कार्यक्रम आयोजनाको हिसाबले सफल अधिवेसनको रुपमा लेख्दै गर्दा अग्रज पत्रकार तारा बराल, कार्यक्रम संयोजक बिटु केसी, ह्युस्टनबासी पत्रकार र समग्र नेपाली समुदायप्रति एउटा सहभागी पत्रकारको हैसियतले आभारी हुनैपर्छ ।
अधिवेसनको व्यावस्थापन निक्कै सबल रहेपनि कार्यसमितिको तयारी फितलो देखियो । कार्यसमितिको पुर्व तयारी नहुँदा अधिवेसनका बिभिन्न कार्यक्रम र माहौल नै अस्तव्यस्त बनेको थियो भने नेतृत्व चयनमै कार्यसमितिका पदाधिकारी व्यस्त रहे । बिभिन्न समयमा खुल्ला एवं बन्दसत्रका कार्यक्रमहरु आयोजना गरिए पनि अधिवेसनको मुख्य पाटोहरु जस्तै कार्यपत्र र प्रतिवेदनहरु पेश नहुँदा नेतृत्वकै लागि मात्र अधिवेसन आयोजना गरिएको जो कोहिले सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । कुनै पनि संघ/संस्थाले नियमित रुपमा माथि उल्लेखित विषयहरुलाई समेट्न नसक्नुले अधिवेसन आयोजना गर्नुको खास अर्थ राखेको पाईन्दैन । ह्युस्टन अधिवेसन अध्यक्षको कार्यपत्र, संस्थाको प्रगति विवरण र आर्थिक प्रतिवेदन बिना नै सम्पन्न गरियो । संस्थाका तात्कालिन महासचिव किशोर पन्थीले समयाभाव संस्थाको प्रगति विवरण एवं प्रतिवेदन पेश गर्न नभ्याएको बताए भने संस्थाकी कोषाध्यक्ष गीता पन्थ अधिवेसनस्थलमै अनुपस्थित रहिन् । तयारी अवस्थामा रहेको संस्थाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न नपाएपनि बन्दसत्र अन्तर्गत बिभिन्न विवादित विधान र अन्य विषयमा छलफल गर्न पाएकोमा महासचिव पन्थीले आंशिक खुसी व्यक्त गरे । नेतृत्व चयनमै समय खर्चेका कार्यसमिति संस्थाको यिनै मुख्य प्रक्रियाहरु पूरा नगर्दा ह्युस्टन अधिवेसन पूर्णरुपमा सफल भएको भन्न मिल्दैन । कार्यसमितिले बितेको कार्यकालमा के कस्तो कार्यक्रमहरु आयोजना गर्यो ? संस्थाले कुन–कुन मितिमा के कति शिर्षकमा खर्चको रकम छुट्टायो यसको लेखा परिक्षण ? संस्थाको भावी कार्यनीति के कस्तो छ ? यी यावत् विषयमा चर्चा र कार्यक्रम नहुदा जो कोहि सदस्यले असन्तुष्टि पोख्नुलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मान्नु पर्छ ।
सदस्य संख्या १ सय आठ रहेको नेजाको चौथो अधिवेसनमा ४९ जना मात्र सदस्यले सहभागिता जनाएसँगै अधिवेसनमाथि बैधानिकताको प्रश्न चिन्ह् तेर्सिएको छ । विधानमा उल्लेख भए बमोजिम जम्मा सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत् अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनु पर्ने प्रावधान रहेपनि ४५ दशमलव ३७ प्रतिशतको सहभागिताले अधिवेसन सम्पन्न गरिएको थियो । यससँगै अन्य सदस्यहरुको मत र अभिमत कुण्ठित भएको छ भने अनावश्यक विषयमा विधानको बखेडा झिक्दै आएको नेजा कार्यसमिति र सल्लाहकार समिति ब्यावहारिक विधानको पक्षमा वकालत गर्नु व्यर्थसिद्ध भएको छ ।
संघमा अमेरिकामा रहेका क्रियाशील पत्रकारहरुको आबद्धता बढेसँगै चौथो अधिवेसनसम्म आईपुग्दा नेतृत्वको लागि होडबाजी गर्नेहरुको संख्या पनि ह्युस्टनमा बढेको देखियो । अध्यक्ष पदकै लागि शूरुमा चार जनाको उम्मेदवारी परे पनि सहमतीको अन्तिम बिन्दुसम्म आईपुग्दा दुई जनाबीच चुनावी प्रक्रिया अपनाउनु पर्यो । चुनावी प्रक्रियामा नगई सर्वसम्मतीबाट नेतृत्व चयनको लागि संस्थापन पक्ष र उम्मेदवारीबीच सहमतीको प्रयास गरिए पनि यसले खास निकास दिन सकेन । संस्थाको नेतृत्वमा किशोर पन्थी, गौतम दाहाल, प्रदीप थापा मगर र पुरुशोक्त ढकालको उम्मेदवारी परेपनि पन्थी र ढकालले अध्यक्षको मैदान खाली गरेर सहमतीको सत्प्रयास गरेका थिए । निर्वाचनको अन्तिम घडीमा पन्थीले अध्यक्ष पदबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिए भने अध्यक्षको लागि लड्दै आएका ढकालले महासचिव पदबाट पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिए । यसैगरी बरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि सूर्य थापा र शिब बिष्टको उम्मेदवारी परेकोमा थापाले अन्तिममा उम्मेदवारी फिर्ता लिए । क्षेत्रीय उपाध्यक्ष (क्यालीफोर्निया) को लागि जाङ्बु शेर्पा र गोकुल ढकालबीच भएको चुनावी प्रतिष्पर्धामा शेर्पा निर्वाचित भए भने अध्यक्षका दुई उम्मेदवार गौतम दाहाल र प्रदीप थापामगरबीच भएको अन्तिम चुनावी स्पर्धामा दाहालले बाजी मारे ।
नेजाको बरिष्ठ उपाध्यक्षबाट उम्मेदवारी दिएर भारी मतले अध्यक्ष बनेका गौतम दाहालको दुई बर्षे कार्यकाल त्यत्ति सहज देखिन्न । बिभिन्न समयमा कांग्रेसी राजनीति र बिभिन्न सामाजिक संघ/संस्थामा समेत विवादित बन्दै आएका दाहाललाई बाँकी कार्यकाल तिनै कारणहरुले गाह्रो बनाउने पक्का छ । उनी अघिल्लो कार्यकालमा समेत विवादमुक्त रहन सकेनन् भने संस्थापनका केहि बाहेक अन्यले उनलाई खुल्ला रुपले सघाउने स्थिती छैन । यसअघि उनी कार्यसमिति र कांग्रेस समर्थकबीच नै लोकप्रियता गुमाउँदै आएका थिए । त्यसोत दाहाल नेतृत्वको नेजाको नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा अमेरिकामा रहेर सक्रिय रुपले पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकार र सञ्चार गृहहरुको ठुलो हिस्सा बाहिर नै छ ।
बुधवार, २०७१ बैशाख २४ गते २०:२० / Wednesday, May 07, 2014 8:20 pm